१९ माघ मध्यरातमा चक्रपथमा गुडाइएको सेनाको बख्तरबन्द गाडी र २३ माघमा नारायणहिटीको ओलीको आमसभा « Bikas Times
केपी ओली थप निरंकुश त बन्दै छैनन् ?
काठमाडौं । गत सोह्र वर्षदेखि आम नेपालीले १९ माघलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्दै आइरहेका छन् । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ नेपाली जनताको अधिकार खोसेकोले नेपालीहरुले यो दिनलाई राम्रो मान्दैनन् । २०१७ सालको दोश्रो संस्करण थियो, उक्त दिन ।
तर, सोह्र वर्षपछि काठमाडौंको चक्रपथमा त्यस्तै झल्को देखियो । सोमबार मध्यरातमा नेपाली सेनाले आफ्ना बख्तरबन्द गाडीलाई काठमाडौंको चक्रपथमा उतारेन मात्रै चक्कर नै लगायो । परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा सेनाले आफ्ना बख्तरबन्द गाडीलाई चक्रपथमा उतारेर परिक्रमा गरेपछि आम नेपालीमा त्रास र आशंका उब्जेको छ ।
हुँदा खाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेका बेला सेनाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो । दिन थियो १९ माघ ।
सेनाले माघ १९ लाई नै किन रोज्यो ? मितिगत जवाफ न सेनासँग छ, न सरकारसँग नै । जुन दिनलाई आम नेपालीले कालो दिन भन्छन्, त्यही दिन सेनाले आफ्नो शक्ति देखाउनुपर्ने ? सेनाको १६ वर्ष अघिको विगत त्यस्तै थियो, जब राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, सेनाले आफ्नो राज शुरु भएको ठान्यो । सडकदेखि सञ्चारगृहसम्म सेना एकछत्र प्रवेश गर्यो ।
नागरिक अधिकार कुण्ठित हुँदा आफूँलाई बलियो महशुस गर्ने सेनाको त्यस्तै चरित्रका कारण सेना सडकमा निस्केको आम जनताले राम्रो मान्दैनन् । यसपाली पनि जनताको आशंका त्यस्तै छ । फेरि पनि सेना बन्दुक र बख्तरबन्द गाडी लिएर सडक र घरघरमा पस्ने पो हो कि ?
सेनाले आफ्नो नियमित अभ्यासका रुपमा बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकालेर परीक्षण गरेको जनाएको छ । पहिल्यै सूचना जारी गरिएकाले भ्रम नहोस् भन्ने उसको अपेक्षा छ । तर, जनताले सेनाको कुरा पत्याएका छैनन्, बरु ओली थप निरंकुश कदम चाल्दैछन् र त्यसैको संकेत तथा रिहल्सल हो कि भन्ने मनोभावनाको विकास भएको छ ।
सेनाको यो कदमले आम मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ ।
यही परिवेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको एक समूहले सेनाले बख्तरवन्द गाडी सडकमा उतारेको ठीक चार दिनपछि अर्थात २३ माघमा नारायणहिटी दरबारको गेटैमा आमसभा गर्दै छ ।
ओलीले किन आमसभाका लागि नारायणहिटी गेट रोजे ? विगतमा सभा जुलुसका लागि निषेधित क्षेत्र रहेको यो ठाउँमा नै ओलीले किन शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजे ? आम मानिसको अर्को जिज्ञाशा छ ।
ओलीले सेनाको बलमा शासनसत्ता हत्याउन लागेका हुन् कि भन्ने आशंका छ छदै छ, यही बीचमा नारायणहिटीको गेटैमा ओलीले आयोजना गर्न लागेको आमसभाले अर्को आशंका जन्माएको छ । के केपी ओली थप निरंकुश त बन्दै छैनन् ?